ဒီနေ့ အတွက် Vote ထပ် လုပ်ပေးကြပါဦးဗျာ... - အောင်သက်ခိုင်
Home » သတင်း » ဒီနေ့ အတွက် Vote ထပ် လုပ်ပေးကြပါဦးဗျာ...
ဒီနေ့ အတွက် Vote ထပ် လုပ်ပေးကြပါဦးဗျာ...
စစ်သား တစ်ယောက်လို နိုင်ငံ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပြီး နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ကို မြှင့်တင် ပေးချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ နှစ် ၅၀ အတွင်းမှ ပထမဆုံး အကြိမ် Miss Myanmar Universe အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အလှမယ်လေး -> မိုးစက်ဝိုင် လေးကို ကျနော်တို့ ၀ိုင်ပြီး support လုပ်ပေးကြရအောင်လားဗျာ... ကျနော်တို့ အတွက် က Like/vote ပေးလိုက်ရလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပေ မယ့်... ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် အနှစ် ၅၀ မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်နေရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ Miss Myanmar Universe အတွက် တော့ အား ဖြစ်စေပါတယ်... အဲဒီ အတွက်... တက်ညီလက်ညီနဲ့ ၀ိုင်းပြီး Support လုပ်ကြပါစို့ဗျာ...
Vote ပေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့...
ဒီလင့်ကတော့... People's Choice Awards for Miss Grand Slam 2013 အတွက်ပါ... vote အရေ အတွက်က သူများ တွေ ထက် နည်းနေလို့ အရင်က ၉ ယောက်မြှောက်မှာပဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ် အခုတော့ vote ၀ိုင်းလုပ်ပေး ကြရင် ၄ ယောက် မြောက်အထိ တက်လာပါပြီ ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဒီလင့်ကို များများ လေး vote လုပ်ပေး ကြစေချင်ပါတယ်...
ဒီလင့်ကတော့... Miss Universe 2013 People's Choice! အနေနဲ့ MISS UNIVERSE® 2013 crown ဟာ ဘယ်သူနဲ့ ထိုက်တန်ပါသလဲ ဆိုတဲ့ crown အတွက် support ဖြစ်စေမယ့် vote လေး တစ်ခုပါ... သူကတော့ 1st ဖြစ်နေပေမယ့်... သူများတွေ လိုက်မမှီအောင်လို့ ဆက်ပြီး vote ပေးကြပါ ဦးဗျာ....
ဒီလင့်လေးကတော့ facebook မှာ ပုံလေးကို like ၀င်ပေး ဖို့ပါ... Miss Universe 2013 People's Choice! အနေနဲ့ MISS UNIVERSE® 2013 crown ဟာ ဘယ်သူနဲ့ ထိုက်တန်ပါသလဲ ဆိုတဲ့ crown အတွက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
Beauty Pageant Grand မှ ချီးမြှင့်သော People Choice Award အတွက် ပုံလေးကို like ၀င်ပေး ဖို့ပါ...
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး ယှဉ်ပြိုင်မယ့် နှစ် ၅၀ အတွင်းမှ ပထမဆုံး အကြိမ် Miss Myanmar Universe အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အလှမယ်လေး အတွက် ကျနော်တို့မှ Support မလုပ်ပေး ရင် ဘယ်သူတွေ Support လုပ်ပေးမှာလဲဗျာ... အဲဒီအတွက်... နိုင်ငံကို ချစ်တယ် ဆိုရင် ၀ိုင်းပြီး Support လုပ်ပေးကြပါ လို့ မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ်... မိတ်ဆွေ အပေါင်း အသင်း ယောင်းရင်းများ ခင်ဗျာ...
(မသိသေးတဲ့ သူများလည်း သိအောင် သိပြီးသား လူများလဲ ထပ်ပြီး vote ပေးလို့ ရအောင် share လည်း လုပ်ပေးကြစေချင်ပါတယ်.. အကယ်၍ နောက်ထပ် vote ရမယ့် offical link တွေ ရှိခဲ့ရင်လဲ ထပ်ပေါင်း ထည့်ပေးကြပါဗျာ)
Facebook အကောင့်တွေနဲ့ Vote လုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် Facebook အကောင့် ရှိသလောက် Vote ပေးလို့ရပါတယ်..
Posted by War war war.lovely at 1:38 PM
အဲဒီလိုvote ပေးရုံနဲ့ Miss Universe ဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ထားတယ်တဲ့လား? မအိပ်မနေ အကြံအဖန်ပေးကြလို့အရင်ဟာတွေလိုဘဲ နာမည်အမျိုးမျိုးတပ်ထားတဲ့ နှစ်သိမ့်ဆုလေး ပေးလိုက်ရင်တော့ကံကောင်းတာပေါ့ဗျာ